Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay ka hadlay xil ka qaadistii uu Golaha Shacabka Soomaaliya ku sameeyey ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, taasi oo uu ku tilmaamay sharci-darro.
Deni, oo hadlay isaga oo ku sugan magaalada Gaalkacyo, ayaa sheegay in xil ka qaadista ay aheyd mid qorsheysneyd oo lagu burburinayay Shirkii Dhuusamareeb iyo shaqadii wanaagsaneyd ee halkaasi lagu qabtay, sida uu hadalka u dhigay.
“Wixii halkaasi ka dhacay waxay aheyd wixii quruxda badnaa ee kasoo baxay Shirkii Dhuusmareeb iyo yididiiladii la qabay ee ahayd in hore loo socdo, wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo,” ayuu yiri Deni.
Deni ayaa sidoo kale eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu sheegay inuu sameeyey wax ka duwan wixii uu ka sheegay Dhuusamareeb iyo wixii lagu heshiiyey.
Warbixintan waxaa soo diray Nuux Muuse Birjeeb.